Erdogan oo sheegay inay Kooxda Daacish tahay khatar ku soo fool leh Caalamka - Radio Risaala: Somali News Online
Home Caalamka Erdogan oo sheegay inay Kooxda Daacish tahay khatar ku soo fool leh...
Erdogan oo sheegay inay Kooxda Daacish tahay khatar ku soo fool leh Caalamka
Madaxweynaha Turkiga, Rajab Dayib Erdogan waxa uu hadalkaasi sheegay Maanta oo Jimco ah, ka hor inta uusan u dhoofin dalal Bosnia Herzegovina iyo Montenegro.
“Weerarkii u dambeeyey ee Kooxda Daacish waxay muujinayaa inay yihiin Khatar ku soo fool leh Caalamka” ayuu yiri Erdoğan oo cambaareeyey weeraradii ay Daacish-ta Afganistan ee ISIS-K shalay ka geysteen agagaarka Garoonka Diyaaradaha ee Kabul.
Madaxweyne Erdogan waxa kale oo uu soo hadal qaaday Codsiga Ururka Daalibaan, isagoo xusay inaysan weli Go’aan Kama-dambays la qaasdanin Codsiga Daalibaan ee Taageerada Garoonka Kabul, sababo walaaca dhanka Ammaanka.
“Kulan qaatay 3 saac iyo Bar ayaa waxaan Daalibaan shalay kula yeelanay Safaaradeena Kabul”ayuu yiri Erdogan, wuxuuna sii raaciyey haddii loo baahdo inay Kulamo kale Daalibaan la yeelan doonaan.
Waxa uu hoosta ka xariiqay inaysan Turkiga codsan doonin Fasax si ay ula hadlaan Daalibaan ama cid kasta.
Previous articleSaddex kamid ah Xulka Qaranka Masar oo ka baaqan doona Ciyaarta Xulalka Angola iyo Gabon
Next articleKenya oo sheegtay in la kordhinayo howlgallada Ciidamadooda ka wadaan Soomaliya